GOOBO MUUQAAL AH: GURYAHA FAA'IIDO LEH IYO ISTICMAALKA DHIRTA DAAWOOYINKA - SOOSAARKA DALAGGA
Marar badan marka lagu socdo xadiiqooyinka iyo xayiraadda kaynta, waxaanu dareenka u saarnaa cawska aan ku soconno. Laakiin inta badan geedi-socodka ayaa noqon kara, haddii aanay ahayn badbaado, ka dibna gargaar la taaban karo iyo gargaar daaweynta cudurka.
Muuqaal quruxsan: halabuurka
Caqli gal ah - kaliya dukaanka of acids organic. Qaybteeda waxaa ku jira: oxalic, acetic, iskudhexaad, malic, glyceric, fumaric, acids iyo siciric acids. Foosto aan yarayn ee cawska: glycosides ee quercetin, kaempferol, myritin, isoramnetin.
Stonecrop waxaa ku jira alkaloids, arbutin, fareeshka, saliida lagama maarmaanka ah, sedamiin, sediin, nicotin, anthraquinones, saponin iyo xeryaha phenolic, fitamiin C, carotene iyo cusbada calcium. In caleemaha succulent ee dhirta waxaa jira tiro badan oo ah makro-iyo nafaqeeyayaalka yar yar:
maciinaha: potassium, kalsiyum, magnesium.
Tilmaamaha raadinta: zinc, selenium, birta, chromium, manganese, copper iyo molybdenum.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira nikkel, silver, titanium iyo barium, kalluunka, amino acids iyo carotenoids.
Ma taqaanaa? Aasaasihii Carolingian, Charles I the Great, ayaa aaminsanaa in dhagax-daaqsimeedku ay ka qaadayaan hillaaca guryahooda, sidaas darteed wuxuu amar ku bixiyay muwaadiniinta dalkiisa si ay u beertaan saldhigyo dabaq ah.
Waa maxay sifooyinka bogsashada ee geedka?
Cawska stonecrop wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo bogsiin leh: xanuunka iyo dhiig-baxa, sababtoo ah alkaloids, wax, iyo ash in ay ka kooban, taas oo nabarka nabarrada si ay u bogsadaan oo ay u yaraadaan caabuq.
Qaar ka mid ah alkaloids, saponins iyo asiidhyada kiimikada waxay caawiyaan inay dejiyaan nidaamka dareemayaasha iyo xoojinta fiilooyinka unugyada dareemayaasha. Caadi ahaan waxqabadka nidaamka dareenka dhexe wuxuu caawiyaa ascorbic acid qaab dhismeedka stonecrop.
Waa suurtagal in la yareeyo cadaadiska, si caadi ah u sameysma unugyada dhiigga ee jirka, yaree halista xinjirta dhiigga iyo xoojinta darbiyada xididdada dhiigga sababtoo ah joogitaanka qaybaha sida alkaloids, fareeshka, asiidhyada dabiiciga ah, ash iyo flavonoids ee cawska.
Iyada oo hargab iyo cudurrada mareenka neef-mareenka, stonecrop waxay kaloo caawisaa sifooyinka faa'iidada leh. Vitamin C wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca jirka; Xajiinta ku jirta qaabka sedumiska waxay gacan ka geysataa joojinta iyo uumiga candhuufta ka soo baxa ugudhaca, yareeyna bararka habka neefsiga iyo naasofarnx. Tani waxay dili doonaan jirooyinka iyo bakteeriyada.
Iyada oo la adeegsanaayo stonecrop waxay hagaajin kartaa shaqada mareenka caloosha iyo mindhicirka. Halkan, tannins, glycosides, ascorbic iyo acids organic ayaa lagu daray. Flavonoids waxay ka caawisaa dhibaatooyinka ka shaqeynaya koontooyinka adrenal, kicin kara sameynta. Iyada oo qayb ka ah qaybaha kale, waxay awood u yeelan karaan qiyaasta wadnaha wadnaha.
Asaasiga dabiiciga ah wuxuu ka caawiyaa miisaanka adoo burburiya dabaqooyinka kolestaroolka, dufinta dufanka, ka caawinta ka takhalusida sunta iyo sida caadiga ah ee jidhka. Muuqaalka dhirta ubaxa ayaa mid ka mid ah guryaha ugu fiican ee maanta bogsiinaya - Koontooyinka ku jira dhirta ayaa awood u leh in ay joojiyaan ayna joojiyaan unugyada kansarka, inay joojiyaan hormarinta metastases.
Xiiso leh Ceelkii Epic Ilya Muromets ayaa ku jiray soddon iyo sadex sano oo shoolaal ah, iyagoo cagaha ku xanuunsanaya oo tabar daran. Waxaa jira halyeey ah in Ilya lagu caawiyay geedo yaryar, oo ay ka mid ahayd dhagxaan.
Sidee loo isticmaalaa stonecrop caan ku ah daawada dhaqameed
Sedum caan ku ah daawada dadweynaha waxay leedahay codsiyo badan oo kala duwan. Fududyada dibadda iyo looska ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurrada maqaarka, nabarrada iyo caabuqyada. Daaweynta saliidda ee sedumta waxay ka caawisaa dareenka atopic iyo cambaareynta. Caleemaha caleemaha ayaa laga saaraa boogaha iyo boogaha. Sedum wuxuu ka caawiyaa daaweynta lichen. Iyada oo laga yareeyo calaamadaha xanuunka daaweynta kudubyada.
Joojiaya faleebo ama qaabka loo yaqaan "decoction" ayaa daaweeya dhibaatooyinka ilkaha sida cudurka ciridka, cirridka, stomatitis.
Biyoodhka biyaha waxaa loo qaadaa gudaha gudaha iyada oo loo marayo daaweynta xameetida, beerka, qanjidhada adrenal. Iyada oo la adeegsanaayo infusions waxaad ka takhalusi kartaa Gooryaanka.
Maraqyada iyo infusions ayaa yaraynaya xaaladda cudurka qaaxada, boronkiitada iyo cudurrada kale ee neefsashada. Ascorbic acid wuxuu kor u qaadaa tonicity iyo saameynta immunomoduliruyuschee ee stonecrop. Caleenta ku xiran qaniinyada cayayaanka ayaa yareyn doona barar iyo cuncun maqaarka, ka caawinta in meesha laga saaro qaniinyada qaniinyada.
Sedum waxaa loo isticmaalaa sida ceeriin iyo daawo rasmi ah, sifooyinkiisa waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada cudurrada indhoolojiga ah: ileyska isha ee isha, gubashada mooska xuubka isha. Dhaqtarka qalliinka, waxaa loo isticmaalaa sidii loogu talagalay fiyuuska lafaha, iyada oo qandhooyinka lagu xiro iyo boogaha trophic ee lugta.
Daaweynta lagu isticmaalo daaweynta boogaha caloosha iyo duodenal. Daaweynta wadnaha, waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo muruqyada muruqa wadnaha, si loo kiciyo wadnaha oo loo xakameeyo foosha. Cawska dhagaxu waa qayb ka mid ah biostimulants badan.
Qalabka qurxinta leh ee lagu caawiyo stonecrops si guul leh uga takhalusi jirrooyinka, boogaha iyo papillomas. Abuur caan ah wuxuu ka caawiyaa in uu cadadkuna cad yahay. Cuntadani waa mid sahlan: kari ubaxyada cusub ee warshadda ee Booqday Furimaha Dagaalka hilibka, tuujin juuska ka soo baxa. Aroortii iyo fiidkii, dufan leh juuska jilicsan.
Dhirta ururinta iyo goosashada
Geedka ubaxyada ee July, dalaggu wuxuu bilaabmaa inta lagu jiro Bisaylkiisa buuxa ee October. Daawada dadweynaha, inta badan cawska ayaa loo isticmaalaa.
Waa muhiim! Cawska dhoobada waxaa loo soo ururiyaa si khaas ah cimilada qalalan, jarjarida mindi ama jajab beerta. Iyada oo xididka xididada laguma talinayo.
Caleemaha la uruuriyey ayaa la googooyaa ilaa 7 sentimitir. U baahan in la qalajiyo hawada cusub, laakiin hooska. Qalitaanku wuxuu socdaa ilaa shan maalmood. Haddii la qalajiyey sida waafaqsan xeerarka, dhirta ayaa sii wadi doonta in ay Bloom. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa in lagu xoqo caleemaha biyo karkaraya oo qallajinaya qorraxda.
Kadibna sii wad si aad ugu qallajisid hooska (qiiqa, dhis dharka). Ka dib qalajinta, alaabta ceeriin waa in lagu duubaa warqad ama bac marsan, lagu keydiyo meel madow, qalalan, qabow. Nolosha khadka - laba sano.
Muuqaal muuqaal ah: ka horjeeda
Dhabarka, marka lagu daro guryaha dawooyinka, waxaa jira waxyaabo ka hortag ah iyo xaddidaadyo. Qaadashada aan la kontoroolin waxay si aad ah u kordhin kartaa cadaadiska dhiigga, taasoo keenta madax-xanuun, madax-wareerid iyo feejignaanta nidaamka dareenka. Xasaasiyadda xayawaanka waa in ay tijaabiso daroogada ka hor intaan la isticmaalin - Xasaasiyad shakhsiyadeed oo suurtagal ah ayaa suurtogal ah
Iyada oo daryeel aad u weyn ka dib la tashanayo takhtarku waa inuu qaataa mukhaadaraad leh hargab doofaar.
Digniin! Khilaafka adag ee haweenka uurka leh iyo carruurta yaryar.
Marka laysku daboolo, waxaa lagu talinayaa in la xiro meelaha maqaarka caafimaad qaba - waxaa jiri kara cuncun iyo barar, gubasho. Casiirka ayaa laga qaadi karaa gudaha ka dib marka uu la tashado dhakhtarka, maadaama maadooyinka xooga badani ay keeni karaan yaqyaqsi, dhibaatooyin dheefshiidka, dhaqdhaqaaq wadnaha oo daciif ah iyo fashfashin la'aan.
Muddo dheer tan iyo awowayaasheennu waxaa lagu daweeyay geedo yaryar waxayna ku noolyihiin maskaxda iyo maskaxda saxda ah sanadaha ugu wanaagsan. Laakiin daawo kasta waa in loola dhaqmaa taxadar la'aan oo aan is-daaweynin iyada oo aan la siin waxbarasho caafimaad. Cudur kasta waa inuu dhakhtarku sheegaa, wuxuuna sidoo kale qori doonaa daaweynta ku habboon.